भारतमा २४ घन्टायता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संक्रमित – Khabar Silo
भारतीय सञ्चारकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ६११ जना संक्रमित भेटिएका हुन् । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएअनुसार यो सहित भारतमा कोरोना संक्रमितको कूल संख्या एक लाख ६ हजार ७५० पुगेको छ ।
त्यसैगरी भारतमा विगत २४ घण्टामा १४० जनाको मृत्यु भएको छ । यहाँ कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म ३ हजार ३०३ जनाको मृत्यु भएको पनि अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
यहाँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित कूल व्यक्तिमध्ये ४२ हजार २९८ जना अस्पतालहरुबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने ६१ हजार १४९ जना उपचारका क्रममा रहेका छन् । –एएनआई
नेपालमा पछिल्ला केही दिनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो साताको तथ्यांक हेर्दा नयाँ संक्रमित थपिने क्रम निरन्तर घटेको देखिन्छ। हिजो (शनिबार) १४ हजार ७ सय ५२ जनाको परीक्षण गर्दा ४ हजार ४८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। अर्थात ३०.४१ प्रतिशतमा संक्रमण देखियो। अघिल्लो सातासम्म परीक्षण गरिएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई संक्रमण देखिने […]
विवाह प्रेम,विश्वास र समर्पणको अन्तिम बिन्दु हो । तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले वैवाहिक सम्बन्ध टुट्ने गरेका छन् । वैवाहिक जीवनलाई समस्यारहित बनाउन विवाह अगाडि निम्न परीक्षण गर्नु उत्तम हुने विज्ञहरु बताउछन् । १. एचआइभी परीक्षण : यदि युवा वा युवतीमध्ये कुनै एकजनामा मात्र एचआइभी संक्रमण रहेछ भने पनि सिंगो जिन्दगी वरवाद हुन्छ । अहिलेको […]
कन्चन बनेर विजय पुगे कन्चनकै घरमा, खुसियाली सँगै रु-वाबासि समेत चल्याे (भिडियो हेर्नुस्) । याे समाचारकाे भिडियाे तल अन्तिममा राखिएकाे छ तल गएर हेर्न सक्नुहुनेछ । रवि लामिछानेले खोले नयाँ टेलिभिजन जहाँ रमेश प्रशाई, दिपकराज गिरि, इन्दिरा जोशी लगाएतका कलाकारले यि कार्यक्रम चलाउदैँ । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलगायतको संलग्नतामा नयाँ टेलिभिजन सञ्चालनमा आउने भएको छ । […]
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, ज्येष्ठ ८ गते बिहीबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
कैलालीमा भारतीय भूमिबाट साढे ८ सय नेपालीको उद्धार